3 ka mid ah hawl-wadeennada wasaaradda hormarinta haweenka ee Puntland oo abaalmarin u helay deeq waxbarasho oo Uganda ah. – Radio Daljir
3 ka mid ah hawl-wadeennada wasaaradda hormarinta haweenka ee Puntland oo abaalmarin u helay deeq waxbarasho oo Uganda ah.
Garowe, Nov, 13 ? Xaflad ballaaran oo maantay lagu qabtay xarunta wasaaradda hormarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland ayaa abaal-marin waxaa deeq-waxbarasho dalka Uganda loogu diray 3 ka mid ahaa hawl-wadeennada wasaaradda haweenka.
Marwo Caasho Geele Diiriye oo ka hadashay munaasabada abaal-marinta ayaa sheegtay in shaqaalahaan helay fursadaan waxbarasho ay ku mutaysteen, kaddib markii la arkay hawl-karnimadooda iyo hufnaantooda shaqo, waxayna ballan-qaaday marwo Caasho inay bixin doonto abaal-marino wajiyo-kale duwana, kuwaasoo ay sheegtay inay siin doonto shaqaalihii kas-bada.
C/qaadir Yuusuf Daahir oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda hormarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland ayaa arrintaan ku timaamay mid kudayasho mudan, waxaana uu shaqaalaha kale ee wasaaradda ku baraarujiyay inay muujiyaan hawl-karnimo si loo guddoonsiiyo abaal-marino kale duwan.
Waa markii ugu horaysay oo 3-ka mida shaqaalaha wasaaradda haweenka loo diro deeqo-waxbarasho oo dalka dibaddiisa ah, waxaana xusid mudan in xafladii maantay lagu guddoon-siiyay 3 hab-lood 3 Computer oo ah nooca loo yaqaaan Laptop-ka.